नेपालका पर्यटकीय स्थल प्रचार गर्न भारतीय पर्यटन व्यवसायीले सहयोग गर्ने, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपालका पर्यटकीय स्थल प्रचार गर्न भारतीय पर्यटन व्यवसायीले सहयोग गर्ने
भारत, (बनारस) । छोटो दुरीमा महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य रहेरपनि प्रचारको अभावमा नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा भारतीय पर्यटकहरू पुग्न नसकेको यहाँका होटल व्यवसायी र टुर अपरेटरहरूले जनाएका छन् ।
शनिवार उत्तर प्रदेशमा जनताको आम्दानी बढ्दै गएको र उनीहरू घुम्न रुचाउने भएपनि पहिलो गन्तव्य नेपाल बन्न नसकेको उनीहरूले जनाएका हुन्।
नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोगमा क्षेत्रीय होटल संघ नेपाल, चितवन सौराहाले बनारसमा आयोजना गरेको अन्तक्रियामा सहभागी व्यवसायीहरूले नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको उचित प्रचारप्रसार गर्न आग्रह गरे । उनीहरूले होटलहरूको स्तर विकास गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।
बनारसी टुरिजम गिल्डका अध्यक्ष रसिद खानले नेपाल र भारतको भाषा, विचार, खाना मिल्ने भएको र दुरी छोटो भएकाले उचित प्रचारप्रसार गर्न सकेमा भारतीय पर्यटक नेपाल जाने बताए।
महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल भए पनि धेरै भारतीयलाई यसको बारेमा जानकारी नभएको उनले बताए। टुरीजम वेलफेयर एसोसिएसन, बनारसका अध्यक्ष राहुल मेहताले यहाँका जनतालाई नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको बारेमा थाहा नहुँदा अन्य देशमा जाने गरेको र छोटो दुरी भए पनि नेपाल जाने नगरेको बताए।
यस खालका कार्यक्रम निरन्तर गर्न सकेमा भारतबाट धेरै पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सक्ने बताए। होटल वजास ग्रान्डका महाप्रबन्धक एचएन पाण्डेले नेपालका धार्मिक स्थलहरू, निकुञ्जहरूको बारेमा यहाँका जनतालाई बुझाउन नसक्दा नेपालमा पर्यटक कम गएको बताए।
यस्तै, डलफिन टुर्स एण्ड ट्राभल्सका सञ्चालक सिरमोर चन्दनले आफूले काठमाडौं र पोखरा पर्यटक पठाएको भन्दै होटलहरूको स्तर सुधार्न पर्यटकले सुझाव दिएको बताए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा शनिवार मात्र थाहा पाएको भन्दै उनले अब यी गन्तव्यहरूमा पनि पर्यटक पठाउने बताए।
होटल मिडोजका महाप्रबन्धक अनुप प्रसादले पर्यटकीय स्थलहरूको प्याकेज निर्माण गरी यहाँको बजारमा प्रचार गर्न आवश्यक रहेको बताए। ट्राभल एजेण्टहरूले यहाँबाट नेपालमा हवाईयात्रा गर्दा हवाईयात्रा नियमित नहुँदा समस्या हुने गरेको बताएका थिए।
‘चलिये पडोशी के पास, हरपल खुशहाल नजारा भी खास’ भन्ने नाराका साथ चितवन, बारा, मकवानपुरका पर्यटन व्यवसायी बिहीबार भारत आई प्रचारमा जुटेका हुन्।
शनिवार बनारसमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक उदय भट्टराई र चितवन पर्यटन विकास समितिका महासचिव विश्वराज सुवेदीले नेपाल र मुख्यरुपमा बारादेखि लुम्विनीसम्मका पर्यटकीय गन्तव्यहरूका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन्।
कार्यपत्रमा लुम्विनीदेखि बारासम्मका पर्यटकीय गन्तव्यहरू र दुरीको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो । कार्यक्रममा क्षेत्रीय होटल संघ नेपाल (चितवन)का अध्यक्ष सुमन घिमिरेले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यका बारेमा प्रचार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए।
उनले आगामी दिनमा पनि सबैको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै सिमा क्षेत्रका भारतीय सहरहरूमा नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचारलाई नियमितता दिने बताए।
कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी युवराज लामाले नेपालमा अब अशान्ति र अस्थिरता सकिएको भन्दै कम खर्चमा घुम्न सकिने महत्वपूर्ण गन्तव्य नेपाल भएकाले नेपालमा पर्यटक पठाईदिन आग्रह गरे।